Toban sanno-guuradii ka soo wareegtay duufaankii Gudrun - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Toban sanno-guuradii ka soo wareegtay duufaankii Gudrun Foto: Ola Andersson / TT
Toban sanno-guuradii ka soo wareegtay duufaankii Gudrun
Toban sanno ayaa ka soo wareegtay duufaankii Gudrun
La daabacay måndag 5 januari 2015 kl 16.20
Toban sanno ayaa ka soo wareegtay markii duufaankii Gudrun ku dhuftay waddanka Sweden. Duufaankan ayaa Iswiidhan ka bilaabmay 8 bishii janaayo sannadkii 2005, kaasi oo sababay khasaarihii ugu weynaa ee dabiici ah ee waayadan danbe taariikhda soo maray. Bololaal kun oo qof ayuu duufaankani gadoomiyay, kuwaasi oo ay ka go'een korontadii iyo waliba aaladaha kale ee wax kulayliyaa.
Waxaana duufaankan ku dhintay 18 qof. Duufaankan ayaa daaha ka fayday faraqa u dhexeeya xaaladaha nololeed ee magaalada iyo miyiga iyo waliba baahiyaha ka jira adeegyada aas aasiga ah ee bulshada.
Waa kan warkii fiidnimadii maalintaas ka baxay idaacadda Ekot.
- Waa 11:00 habeenimo, waxaana halkan idinkala hadlaysa idaacadda Ekot. Waxaanu ku bilaabaynaa duufaanka ku dhuftay guud ahaan waddanka Iswiidhan. Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay kadib markii ay ku soo dhaceen dhir uu soo riday duufaanku. Shilalkan dhimashada gaystay ayaa ka dhacay duleedka deegaanka Höör, meel u dhaw deegaanka Sturup ee gobolka Skåne iyo waliba duleedka deegaanka Vimmerby. Ugu yaraan 300 000 ayay soo foodsaartay koronto la'aani. Shirkadaha korontada ayaan waxba ka qaban karin dhibaatadan. Xaaladda waddooyinka koonfurta Iswiidhan ayaa cakiran, waxaana waddooyinka ku xaniban gaadiid badan oo ay waxyeeleeyeen geedo uu duufaanku soo riday.
Kani waxa uu ahaa warkii ay idaacadda Ekot sii daysay fiidnimadii 8 janaayo 2005.Duufaankan ayaa si dhakhso ah u gaadhay qaybo badan oo dalka ah. Maalin kadib waxa uu duufaanka Gudrun si weyn u saameeyay kaymo badan oo ku yaalla koonfurta waddanka Iswiidhan. Waxaanay aroornimadii kale dadka ku nool koonfurta Iswiidhan ku tooseen khasaare baaxad weyn oo gaadhay deegaankoodii iyo isbeddel aanay filayn.
Markii ay istaageen dabaylihii baaxadda lahaa, waxa ay korontadu ka maqnayd 730 000 goobood, waxaan gebi ahaanba hawada ka maqnaa isgaadhsiintii telefoonada. 70 milyan oo muubik mitir oo kayn ah ayuu khasaare u geystay duufaanku. Tiradaasi oo u dhiganta dhirta waddanka oo dhan la gooyo halkii sanno, taasi oo ka dhigan saddex jeerlaab dhirta sannadkii laga jaro koonfurta dalka.
Karl-Olof Persson waxa uu ka mid yahay dadka uu duufaankani khasaaraha soo gaadhsiiyay ee ku nool deegaanka Våxtorp ee duleedka Laholm. Waxa uu idaacadda uga warramay sidii uu duufaanku u dhacay iyo saamayntii uu ku yeeshay beertiisa.
- Waxa ay ahayd dhibaato weyn. Tani waa mid niyadjab ku keenaysa qofka kasta , waxaanan filayaa in ay tahay wax laga xumaado.
Kaasi waxa uu ahaa Karl-Olof Persson oo ka warramayay khasaarihii soo gaadhay beertiisa.
Toddoba qof ayaa ku dhimatay duufaankan, halka 11 qof oo kale ku dhinteen intii lagu gudojiray waxqabashadii khasaarihii uu gaystay duufaankani. Intii lagu gudojiray dib u hagaajintii goobihii uu duufaanku khasaaraha u gaystay waxa ku dhaawacmay dad ay tiradoodu gaadhayso 141. Boqolaal qof oo isugu jira waayeel iyo bukaan ayaa laga raray goobihii ay ku noolaayeen, si looga hortago in uu duufaannkani waxyeello u gaysto. Halka dad badanina ay gadoon ku noqdeen goobihii ay ku noolaayeen, kadib markii ay go'een isusocodkii gaadiidku. Baabuur iyo tareeno badan ayaa ku xanibmay waddada, kadib markii ay waddooyinkii jareen dhir uu soo riday duufaanku. Korontada oo meelo badan ka maqnayd ayaa sababtay in la xidho dugsiyada waxbarashada iyo xarumaha caafimaadka. Waxa loo baahday in tamarta korontada dhalisa laga soo qaato xarumaha ciidamada milatariga iyo waliba dalka dibaddiisa. Shaqaalaha gargaarka degdeg ah iyo waliba haayadda waddooyinka ayaa aad ula tacaalay sidii ay gacan uga gaysan lahaayeen xakamaynta khasaaraha ka dhashay duufaankan, waxaanay dhanka kale ay caqabad kala kulmeen dhirta uu duufaanku soo ridayay oo khatar ku ahayd in ay wax yeesho shaqaalaha iyo gaadiidka ay wataan.
- Duufaankani waxa uu keenay in markii ugu horaysay gurmad laga dalbado ciidanka booliiska ee gurmadka degdegga ah. Waxa uu aha agobolka Kronoberg ka dalbaday in gacan laga siiyo masiibadan ku habsatay. Småland waxa wali jira deegaano ay korontada iyo isgaadhsiintu ka maqan yihiin. Waxaana ilaa hadda jira waddooyin badan oo ay gooyeen dhirta uu dhulka soo dhigay duufaanku.
Marka laga yimaaddo ciidamada booliiska ah, waxa hawshan ka qaybqaatay oo la dalbaday 800 oo qof oo ah shaqaalaha gargaarka, kuwaasi oo ka shaqaynayay nadiifinta goobihii ay waxyeeladu soo gaadhay, hagaajinta goobaha uu khasaaruhu soo gaadhay iyo waliba waxkaqabashada dhanka isgaadhsiinta. Hawshan ayaa ahayd tii ugu weynayd ee ay si nabad ah gacan weyn ka gaystaan ciidanka milatariga dalku.
Wakhti dheer bay qaadatay intii ay bulshadu ka soo kabanaysay waxyeeladii ka dhalatay duufaankani. Qaybo badan oo dalka ka mid ahna hal bil ayay ku qaadatay in ay korontadii iyo khadadka telefoonadu caadi u shaqeeyaan mar labaad. Haayadda badbaadada bulshada ee marka magaceeda la soo gaabiyo la yidhaa MSB, ayaa warbixin ay xaaladdan ka diyaarisay ciwaan uga dhigtay , hannaankii shaqada bulshada oo istaagay 24 saacadood.
Duufaankani waxa uu saamayn weyn oo dhaqaale iyo mid bulshaba ku yeeshay dad badan oo ku nool koonfurta waddanka Iswiidhan. Kharashka uu dalka ku kacay sannadkaasi 2005 waxa uu dhammaa 20,8 bilyan oo karoon. Taasina waxa ay keentay in midowga Yurub uu Iswiidhan ugu deeqo lacag dhan 768 milyan oo karoon, si wax looga qabto khasaarihii ka dhashay duufaankan.
Sannad kadib markii uu dhacay duufaankii Gudrun, waxa koonfurta Iswiidhan socdaal ku soo maray wariyaha Ola Hemström, si uu u soo arko deegaanadii uu duufaanka Gudrun khasaaraha weyn u geystay. Wariyuhu dadkii uu la kulmay waxa ka mid ahaa Jan-Olov Svensson oo uu kula kulmay deegaanka Värpeshult. Jan-Olov waxa uu wariyaha tusay khasaarihii weynaa ee uu duufaanku u gaystay beertiisii weynayd ee uu rajaynayay in wiilkiisu ka dhaxli doono.
- Khasaare weyn baa soo gadhay beeraha ku yaalla tuuladan Värpeshult iyo hareeraheeda. Waxa aan u malaynayaa in ay tani xaaladdii ugu xumayd ee soo marta gobolkan Kronobergs. Waa sidaan maqalnay. Dad badan oo xaggan yimid waxa ay sheegeen in ay tani tahay middii ugu darnayd ee deegaankan soo marta.
Jan-Olov isaga oo ka warramaya inta uu leeg yahay khasaaruhu waxa uu yidhi;
- Waxaan u malaynayaa in 90% dhirtii ku taallay beeraha tuulada ku yaalla uu duufaanku gooyay. Dhir badan oo da'doodu ahayd 20-25 jir ayaa meesha ka baxday.